Wararka Maanta: Isniin, July 12, 2021-Galmudug iyo Puntland oo ka hadlay dad shacab ah oo isku qoys ah oo lagu laayay gobolka Mudug
Wasiirka warfaafinta Galmudug, Axmed Shire Falagle oo BBC la hadlay, ayaa sheegay in maamulku u howl galay sidii gacanta loogusoo dhigi lahaa maleeshiyaadka falkaasi geystay.
Wasiirku wuxuu sheegay in dadkaasi loo dilay aano qabiil ayna ahaayeen labo carruur iyo adeerkood oo gacanta ku hayay, iyadoo horay aano qabiil loogu dilay aabbahood.
Dableyda ayaa weerarka kusoo qaaday qoyskan habeen hore saacaddu markay ahayd 12:00 habeenimo, waxayna isla goobta ku dileen saddexda qof, halka uu dhaawac soo gaaray gabadh kale oo qoyska katirsanayd.
Dhinaca kale, Maamulka Puntland, ayaa ku eedeeyay dilkaan in ay ka dambeeyaan dad xiriir laleh kooxda Alshabaab islamarkaana ujeedada laga leeyahay ay tahay in Galmudug iyo Puntland laga mashquuliyo dagaalka Alshabaab.
Guddoomiyaha gobolka Mudug, Cabdiladiif Muuse Nuur ayaa sheegay in mar kaste oo Puntland iyo Galmudug bilaabaan duulaan ka dhan ah Alshabab, ay dhacdo in Shabaab iyagoo dad adeegsanaya ay colaad ka huriyaan gobolka Mudug.
Guddoomiye Cabdiladiif ayaa sheegay in dadka falkaas geystay ay yihiin dad reer Puntland ah, wuxuuna sheegay inay ku maqan yihiin oo ay gacanta kusoo dhigayaan.